निक पोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
विलियम सलिबा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Fabio Silva बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
गेब्रियल Magalhaes बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू कोलम्बियाई फुटबल खेलाडीहरु डुवान जपाटा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
सुरू गर्दै, उनको उपनाम "ठूलो पैन्थर“। हामी तपाईंलाई डुवान जपाटाको बाल्यकाल कहानी, जीवनी, पारिवारिक तथ्य, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन र अन्य लोकप्रिय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज दिन्छौं जब उनी बच्चा थिए जबदेखि उनी लोकप्रिय भए।
डुवान जपाटाको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट्स: सेमाना र गोल।
हो, सबैलाई Zapata आफ्नो गति, शारीरिकता र गोल स्कोरको लागि उसको ठूलो आँखाको लागि थाहा छ। यद्यपि, केवल केहि थोरैले हाम्रो संस्करण डुवान जपाटाको जीवनीलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
डुवान जपाटा बचपन कहानी- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरु गर्नका लागि, डुभेन एस्टेबन Zapata Banguero कोलम्बियाको कालीस्थित राफेल उरिबे उरीब क्लिनिकमा अप्रिल १ 1 1991 १ को अप्रिलको जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नी आमा, स्वर्गीय एल्फा सेली बंगुएरो र उनका बुवा लुइस ओलिभर जपाटामा जन्मेका दुई छोरा मध्ये दोस्रो हुनुहुन्छ। तल दुवान जपाटाका प्यारा आमा-बुबाको दुर्लभ फोटो छ।
दुवान जपाटाका अभिभावक - उनकी आमा, स्वर्गीय एल्फा सेली बंगुइरो र उनका बुबा लुइस ओलिभर जपाटालाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: सेमाना।
दुवान जपाटाको परिवार पृष्ठभूमि: के तपाईंलाई थाहा छ फुटबल जादुगर अफ्रीकी-अमेरिकी परिवारको उत्पत्तिको साथ कोलम्बियाली राष्ट्रिय मिश्रित जाति हो। वास्तवमा दुभान जपाटाका बुबाआमाले उनलाई कालीको अगुआब्लान्का जिल्लाको कर्डोबा नजिकै हुर्काए जहाँ उहाँ उनकी दिदी सिन्डी क्यारोलिनासँगै हुर्कनुभयो।
एक प्यारा दुभान जपाटा बचपन फोटो- उनी कालीको कर्पोबामा हुर्केका थिए। छवि क्रेडिट: सेमाना।
डुवान जपाटाको प्रारम्भिक जीवन: कर्डोबामा हुर्केका युवा दुवानले आफ्नो घर कलीको साँघुरो पैदल सडकमा फुटबल खेल्न शुरू गरे। त्यतिबेलाका युवा त्यसमा थिए, उसले प्रख्यात फुटबल खेलाडी बन्ने सपना देख्यो, प्रसिद्धि वा अद्भुत धनको लागि होइन तर प्लेस्टेशन वहन गर्न सक्षम हुन!
डुवान जपाटा बचपन कहानी- शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
डुभेन ११ वर्षको हुँदासम्म उनका फुटबल प्रतिभा क्रिस्टल स्पष्ट भइसकेका थिए जसले आफ्ना आमाबुबालाई यो उचित ठानेका थिए कि सिउदाड कोर्डोबाको लाइसो सुपीरियर डेल भेलेमा उनको परम्परागत शिक्षा फुटबलमा पेशेवर क्यारियर निर्माणसँगै जान्छ।
११ मा, दुवानसँग पहिले नै एथलेटिक फिजिक थियो र फुटबलमा क्यारियर निर्माण सुरु गर्न तयार थियो। छवि क्रेडिट: सेमाना।
यसैले, parents औं कक्षाको डुभनले आफ्ना आमाबाबुको स्वीकृति लिएर २००२ मा स्थानीय क्लब अमरिकिका डि कालीको बाल्यकाल स्तरमा भर्ना हुन अनुमति दियो। स्थानीय क्लबमा डुवानले शक्ति, सीप र उचाइ यति नै बढायो कि उनी पहिले नै थिए। १.6 मिटर उचाईमा खडा जब उहाँ २०० 2002 मा १ 1.86 वर्षको हुनुहुन्थ्यो।
डुवान जपाटा बचपन कहानी- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
यो अम्रिका दे कालीमा नै दुभान एकै ठाउँमा खडा भयो, पेशेवर बने र उनले आफ्नो प्रशिक्षक डिएगो उमायाको प्रशंसकको शुरुवातमा गोल गरे - जसले यस अघि उसलाई क्लबको वरिष्ठ टोलीसँग प्रशिक्षण दिने मौका दियो। डुभेनले अम्रीका डे कालीका लागि दुई अन्य सत्रहरू (२०० / / २०१० र २०१० / ​​२०११) खेलाए। अर्जेन्टिनीको पक्षमा edण लिनु भन्दा पहिले - एस्टुडियान्ट्सले जहाँ उनले पहिलो प्रदर्शनमा रन बनाए।
श्रेणीको माध्यमबाट उठ्दै: तपाईं उसलाई क्लब América de Cali को रिजर्भ टोली संग भेट्न सक्नुहुन्छ? छवि क्रेडिट: सेमाना।
फुटबल फुटबलले गोलको टेबुलमा ठूलो वृद्धि रेकर्ड गर्यो तर कहिलेकाहीं क्लबको रिजर्भ टीमसँग देखा पर्‍यो। यस्तै, एस्टुडियान्ट्सले अम्रीका डे कालीबाट खेलको आधा अधिकार किनेका थिए। उसले वेस्ट हाम लगायतका शीर्ष उडान युरोपेली क्लबहरूबाट चासो लिन थाल्छ जुन उनलाई हस्ताक्षर गर्ने निकट थियो तर हार भयो किनकि उनीहरूले उनको लागि वर्क परमिट प्राप्त गर्न सकेनन्। डुवान जापाटाको परिवारको आनन्द इटालियन क्लबमा कुनै सीमानाको थाँहा थिएन, नेपोलीले उनलाई इटालियन भिसा सुरक्षित गर्न मद्दत गर्‍यो।
डुवान जपाटा जीवनी- सडकको प्रसिद्धि कथा
डुवान जो अन्ततः इटालियन साइड नेपोलीले किनेका थिए, उनी त्यस समय क्लबको सब भन्दा महँगो हस्ताक्षरमध्ये एक भए पनि आफूलाई प्रमाणित गर्ने राम्रो अवसर पाएनन्। वास्तवमा नेपोलीको तत्कालीन कोच Rafa Benitez अक्सर टिप्पणी गरे कि दुवान क्लबको लागि महत्वपूर्ण थियो तर स्ट्राइकरको प्लेटाइमको अभावले यसको विपरित प्रमाणित गर्‍यो।
नेपोली त्यहीं थिए जहाँ उनले पहिलो फ्लाइट फुटबल खेल्ने निराशाको सामना गरे। छवि क्रेडिट: गोल।
यसैले, यो आश्चर्यजनक थिएन नेपल्स दुवानलाई उडिनीमा edण दिएका छन जहाँ चोटपटकका कारण उनलाई अस्थिर फाराम लागेको छ। न दुभान सामदोरियामा loanणमा प्रभावशाली थिए जहाँ उनी अझै आफ्नो सम्भावना पूरा गर्न टाढा थिए। वास्तवमा, दुभानले २०१ 2018 विश्वकपको लागि कोलम्बियाको प्रारम्भिक टीममा कल पाएको थियो तर स्पष्ट कारणका लागि अन्तिम रोस्टरमा कटौती गरेन।
डुवान जपाटा जीवनी- फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
फिनिक्स जस्तै कि यसको खरानीबाट उग्यो, दुभानले आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न सुरु गरे अटलान्टाइटालेली पक्षले निर्णय गरे कि उनलाई अब आवश्यक पर्दैन।
गोल पछि गोलले दुवानले आफैंलाई सेरी ए लीगको संयुक्त रुपमा शीर्ष स्कोररको रुपमा स्थापित गरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनको पहिलो सीजन मा! उनले एटलान्टालाई २०१२ कोपा इटालिया फाइनलसम्म पुग्न र सेरी एमा तेस्रो स्थान हासिल गर्न मद्दत गरे। बाँकी, उनीहरू भन्छन, इतिहास हो।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको साथ कसले पुरस्कार साझा गरे हेर्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
डुवन जपता पत्नी र बच्चाहरू
दुवान जपाटाको पारिवारिक जीवनमा अघि बढ्दै, उनले आफ्नो प्रेमिका बनेकी श्रीमती नाना मोन्टोलाईसँग विवाह गरे र उनको वैवाहिक जीवनमा उनको लागि थुप्रै राम्रा कुराहरु भइरहेका छन्। २०१२ मा कालीमा दुभान अर्जेन्टिनाको पक्ष इस्टुडियान्ट्सका लागि खेल्दै गर्दा दम्पतीहरू भेटेका थिए। नाना एक विश्वविद्यालयका विद्यार्थी थिए जुन त्यस समयमा मनोविज्ञान पढिरहेका थिए। उनीहरूले केहि बर्ष पछि मिति दिए र विवाह पछि वर्ष पछि विवाह गरेर उनीहरूको सम्बन्धलाई अर्को तहमा पुर्‍याए।
दुवान जपाटाकी श्रीमतीलाई भेट्नुहोस्। तिनीहरू एक अर्काको लागि पूर्ण देखिन्छन्, हैन? छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
नाना एक आइमाई थिईन् जसलाई राम्ररी थाहा थियो उनको मान्छेलाई कसरी राख्ने! यस्तै, दुवनले आफ्नी स्वास्नी बन्ने महिलालाई मिति दिएका बेलामा अन्य गर्लफ्रेंडहरू भएको कुनै रेकर्ड छैन। यो बायो लेख्दा दम्पतिहरु दुई प्यारा बच्चाहरुका अभिभावक हुन्। तिनीहरूमा डान्ट्जेल (एक छोरी) र डेटन (एक छोरा) पर्छन्।
दुवन जपाटा आफ्नी श्रीमती र बच्चाहरू डन्टल र डेटनको साथ फोटो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
डुवन जपता पारिवारिक तथ्य र जीवन
परिवारविना डुवान जपाटा को हुन् र यदि उसले आफ्नो बुबाआमा र भाईबहिनी शुरुदेखि नै नपाएको भए के हुने थियो? हामी तपाईंहरूलाई दुभान जपाटाका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा-बुबाको साथ शुरू गर्ने कुरा ल्याउँदछौं।
दुवान जपाटाको बुबाको बारेमा: लुइस ओलिभर Zapata फुटबल प्रतिभा को बुबा हो। उहाँ कोरीम्बिया, कोरिन्थमा जन्मनुभएको थियो र टेतिल्लोमा हुर्काउनुभयो। हो, जपाटा एक मायालु र सहयोगी बुवा थिए, उनले दुभानलाई आज्ञाकारी र सम्मानजनक बच्चा हुन कडाईका साथ हुर्काए र फुटबल खेल्नेसँग शिक्षाविद्हरूलाई सन्तुलनमा राखे। बढी के? लुइसले आफ्नो करियर निर्माणको क्रममा दुवानलाई प्रशिक्षण दिन कहिल्यै छोडेन। लुइसले अब आफ्नो एक मात्र छोरोलाई ध्यान केन्द्रित गर्न र नम्र रहनु पर्ने कुरामा जिम्मेवारी दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
लुइसको एक दुर्लभ तस्विर जसले उनको छोरोको क्यारियर उपलब्धिहरूको महँगो बिदाको मजा लिदै छ। छवि क्रेडिट: WTFoot।
दुवान जपाटाकी आमाको बारेमा: लेट एल्फा सेली बैंगुएरो डुवान जपाटाकी आमा। उनी कोलम्बियाको पाडिल्लामा जन्मेकी थिई र टिटिलोमा पनि हुर्किए जहाँ उनले दुवानका बुवालाई भेटे। उनको श्रीमान लुइसले जस्तै एल्फा पनि उनको एक मात्र छोराको लागि महत्वपूर्ण भूमिका थियो। वास्तवमा, उनलाई ११ बर्षीय दुवानलाई स्थानीय क्लब अमरिकिका डे कालीको बाल्यकाल स्तरमा ट्राउआउटको लागि श्रेय दिईन्छ। दुर्भाग्यवश उनी आफ्नो श्रमको फल उपभोग गर्न लामो समयसम्म बाँच्न सकेनन् जुन २०१० मा उनको पतन भयो र उनको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु दुवानले गहिरो महसुस गरे पनि उहाँ कम समयमै सँगै आउनुभयो र आफ्नी आमाको स्मृतिलाई सम्मान गर्ने निर्णय गर्नुभयो। फुटबल मा केन्द्रित रहन।
दुवान जपाटाकी आमालाई भेट्नुहोस्: उहाँ अरू जस्तो हुनुहुन्नः एल्फा सेली बंगुइरोको स्मृति उनको छोरा दुभानको लागि सँधै मायालु रहनेछ। छवि क्रेडिट: सेमाना।
दुवान जपाटाका भाई बहिनीहरूको बारेमा: के तपाईंलाई थाहा छ कि दुवानको कुनै दाइ छैन तर एक बहिनी जो उसको जेठो दाइ वा दिदी हो। सिन्डी क्यारोलिना भनेर चिनिने ती महिला डुवानसँग हुर्केकी छिन् र उनको प्रारम्भिक जीवनदेखि आजसम्म उनीसँग नजिक भएको छ। यो चाखलाग्दो छ कि दुबै फुटबलको लागि समान उत्कटता साझा गर्छन् र संचार लाइनहरू खुला राख्छन् जुन तथ्य तिनीहरू माइल टाढा छन्।
दुभान जपाटाको बहिनी- सिन्डी क्यारोलिना भेट्नुहोस्। दुबै सँगै हुर्किए र अझै पनि एक नजिकको बन्धन साझा। छवि क्रेडिट: सेमाना।
दुवान जपाटाका आफन्तहरूका बारे: दुवान जपाटाको तात्कालिक जीवनबाट टाढा, आफ्नो पुर्खा र पारिवारिक जराको बारेमा त्यति धेरै ज्ञात छैन किनकि यो उहाँकी आमा र बुवा हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। दुभान जपाटाका एक आमाबुवालाई धन्यवाद, उहाँ क्रिस्टियन जापाटासँग सम्बन्धित छ जो उहाँकी भतीजा हो। क्रिस्टियन सेरी ए साइड जेनोवाका लागि खेल्छन्, आफ्ना काका र काकीको बारेमा त्यति धेरै जान्दैनन् जबकि उनका भतिजा, भतिजा र चचेरा भाईहरू यो बायोग्राफी लेखेको समयमा चिनिन सकेका छैनन्।
दुवानको प्रसिद्ध चचेरो भाई क्रिस्टियन जापाटालाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: ट्रान्सफरमार्केट।
डुवान जपाटा जीवनी-व्यक्तिगत जीवन तथ्य
एक विशाल स्ट्राइकरको रूपमा दुवान Zapata को स्थिति पूरक छ - र अझ राम्रो बनाइएको - एक विशाल व्यक्तित्व द्वारा जुन मेष राशिफल चिन्ह द्वारा परिभाषित छ। ऊ नम्र, ऊर्जावान, रमाईलो, लचिलो, महत्वाकांक्षी हो र आफ्नो निजी र व्यक्तिगत तथ्यहरूको बारेमा तथ्य खुलाउन खुला छ।
जब स्ट्राइकर प्रशिक्षण वा फुटबल खेलिरहेको हुँदैन, ऊ केहि गतिविधिहरू संलग्न गर्दछ जुन ओभरटाइमलाई उसको रुचि र रुचि हो भनेर मानिन्छ। तिनिहरुमा यात्रा, पौडी खेल्ने, भिडियो खेल खेल्ने र उसको परिवार र साथीहरु संग राम्रो समय बिताउने समावेश छ।
शक्तिशाली स्पीडोमिटरको नजिक अध्ययनले मिनी कूपरमा दुवान क्रूज सुझाव दिन्छ। त्यसमा केटाले उनीसँग सेल्फी चाहेकोमा छक्क पर्नु पर्दैन। छवि क्रेडिट: WTFoot।
डुवान जपाटा जीवनी- जीवन शैली तथ्य
कसरी दुवान जपाटाले बनाएको र आफ्नो पैसा खर्च गर्ने सन्दर्भमा, उहाँसँग अनुमानित कुल सम्पत्ति writing १ मे लेख्ने समयमा छ। स्ट्राइकरको धेरैजसो धनसम्पत्तिको तलब र मजदूरीमा स्रोतहरू छन् जुन उसले माथि उडान फूटबल खेल्नको लागि प्राप्त गर्छ जबकि अनुमोदनहरू उसको बढ्दो सम्पत्तीमा महत्वपूर्ण हिस्सा दिन्छ।
त्यस्तै, स्ट्राइकरले विलासी जीवनशैली बिताउँछ कि प्रशंसकहरू र दुश्मनहरू उनीप्रति ईर्ष्या गर्छन्। दुवानको राम्रो जीवनको प्रमाणमा विलासी कारहरूको साथसाथै सस्तो घर र अपार्टमेन्टहरू चलाउन सक्ने क्षमता पनि समावेश छ।
डुवान जपाटा जीवनी- अनटोल्ड तथ्यहरू
हाम्रो डुवान जपाटा बचपनको कथा र बेग्रेप गर्न यहाँ स्ट्राइकरको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
तथ्य # १: तलब ब्रेकडाउन: लेख्ने समयमा, एटलान्टा ई.पू. संग स्ट्राइकरको सम्झौतामा उसले, ,,4,680,000०,००० को ठूलो तलब कमाइरहेको देख्छ प्रति वर्ष। डुवान जपाटाको तलब गहिरो संख्यामा क्र Cr्च गर्दै, हामीसँग निम्न छ;
अमेरिकी डलरमा सफा
यूरो मा निलम्बन
पौंड स्टर्लिंगमा SALARY
प्रति वर्ष $ 5,122,377 € 4,680,000 £ 3,970,867
प्रति महिना $ 394,029 € 360,000 £ 305,405
PE हप्ता $ 98,490 € 90,000 £ 76,351
प्रति दिन $ 14,069 € 12,857 £ 10,908
PER HOUR $ 586 € 536 £ 455
PER MINUTE $ 9.76 € 8.9 £ 7.58
PER SECOND $ 0.16 € 0.15 £ 0.13
यहाँ, हामी प्रत्येक सेकेन्ड दुवान जपाटाको तलब वृद्धि गर्छौं। तपाईले यो पृष्ठ हेरिरहनु भएको हुनाले उसले यति धेरै कमाई गर्यो।
यदि माथिको संख्या बढेको छैन भने यसको मतलब यो हो कि तपाईं ए बाट हेर्दै हुनुहुन्छ AMP पृष्ठ. अब क्लिक गर्नुहोस् यहाँ Zapata को तलब कमाई प्रति सेकेन्ड हेर्न. तपाईंलाई थाँहा थियो?… यसले युरोपमा औसत कामदार कम्तिमा .18.5..XNUMX बर्ष लिन सक्दछ ठूलो पैन्थर १ महिनामा कमाउँछ।
तथ्य # २: धर्म: रिपोर्टका अनुसार यो सम्भव छ कि दाभन जपाटाका अभिभावकले उनलाई क्याथोलिक धार्मिक विश्वासको पालनामा हुर्काए। तपाईं, हड्ताल गर्ने, धर्ममा ठूलो हुनुहुन्न तर एक पटक क्याथोलिक चर्चमा देखा पर्नुभयो (तल हेर्नुहोस्)। यस विकासले दुवान इसाई र अभ्यास गर्ने क्याथोलिक हुने सम्भावनालाई श्रेय दिन्छ।
डुवान जपाटाको धर्म- कुनै पनि व्यक्ति उहाँ एक विश्वासी हो भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्दैन। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
तथ्य # 3: डुवान जपाटा ट्याटु तथ्य: जस्तै डोनेएल मालेन, शमूएल चुकुउज, Luis Muriel र क्रिज्जट्टो पेटेक, दुवन जपाटासँग लेख्ने समयमा कुनै शरीर कला छैन न त प्रशंसकहरूसँग उनका ट्याटूहरू छन्। ऊ बरु आफ्नो शरीर, क्षमता र सम्भावित उचाई अझ बढी र प्रभावकारी हवाई duels को लागि सुधार गर्न मा केन्द्रित छ।
फोटो प्रमाण यो छ कि लेख्ने समयमा उनीसँग कुनै ट्याटू छैन। छवि क्रेडिट: WTfoot।
तथ्य #:: दुभान जपाटा फिफा रेटिंग: के तपाईंलाई थाहा छ दुभान जपाटासँग लेख्ने समयमा 83 87 को समग्र फिफा रेटिंग छ। यद्यपि उसको रेटिंग्सले हालसालैको खगोल सम्बन्धी वृद्धि अनुभव गरेको छ, तर XNUMX XNUMX को रेटिंग फिफा क्यारियर प्रेमीहरूलाई आकर्षक लाग्ने छ कि करीव सिद्धान्तको कम्बो चाहिन्छ भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन।
उसको रेटिंग्स माथि र छिटो बढ्दो छ। छवि क्रेडिट: SoFIFA।
तथ्य # Du: दुवान जेपाटा घरपालुवा जनावरहरू: त्यहाँ असंख्य स्ट्राइकरहरू छन् जो घरपालुवा जनावरहरूको लागि विशेष गरी कुकुरहरूका लागि चीज छन् र दुभान जपाटा ती मध्ये एक हो! वास्तवमा, उसको कुकुर आफ्नो परिवारको थप गर्न को जस्तै छ जुन उनले परिवारको फोटोमा फिचर गरेको तरिकामा प्रस्ट देखिन्छ।
के तपाई दुवन्त जपाटा र उनको परिवार जस्ता घरपालुवा जनावरहरुलाई माया गर्नुहुन्छ? छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
तथ्य # 6: दुवान जपाटा धूम्रपान र पिउने तथ्य: दुवान जपाटालाई कडा पेय पदार्थ सेवन गर्न दिइएको छैन, न त उनी लेख्ने समयमा धुम्रपानमा भेटिएका थिए। यस्तो स्वस्थ बानीका साथ, दुवान फुटबल खेलाडीहरूको लिगमा सामेल हुन्छन् जसले बाँच्न र स्वस्थ रहनको आवश्यकतालाई बिर्सेका छैनन्।
डुवान जपाटा जीवनी- विकी नलेज बेस
दुभान जपाटा बायोग्राफी तथ्यहरूको यो अन्तिम खण्डमा तपाईले हाम्रो विकी ज्ञानको आधार देख्नुहुनेछ। तल देखाइएको छ, यसले तपाईंलाई संक्षिप्त र सजिलो तरीकामा स्ट्राइकरको बारेमा जानकारी फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
डुवान जपाटाको पूरा नाम डुभेन एस्टेबन Zapata Banguero
डुवान जपाटाको जन्म मिति १ अप्रिल १ 1 1991 १
डुवान जपाटाको उमेर २ ((फेब्रुअरी २०२० को रूपमा)
डुवान जपाटाको पिताको नाम लुइस ओलिभर Zapata
डुवान जपाटाको आमाको नाम Elfa Cely Banguero (लेट)
डुवान जपाटाको उचाई 1.89 मीटर (6 फुट2मा)
डुवान जपाटाको जन्म स्थान प्याडिला, काउका, कोलम्बिया
दुवान Zapata बहिनी सिन्डी क्यारोलिना
डुवान जपाटाको काकी क्रिस्टियन जापाटा
डुवान जपाटाको धर्म ईसाई धर्म (क्याथोलिज्म)
डुवान जपाटाकी श्रीमती नाना मोन्टानो
डुवान जपाटाका बच्चाहरू Dantzel (उसकी छोरी) र डेटन (उनको छोरो)।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो दुवान जपाटा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
एटलान्टा ई.पू. फुटबल डायरी
नापाल फुटबल डायरी
Alessandro Bastoni बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
जोसिप Ilicic बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
लुइस मुरिएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
आर्काडियाउज मिलिक बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Massimiliano Allegri बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
कलेजो कुलबिबिलाइ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
Lorenzo Insigne बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
मर्कर हम्सिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
जर्जिनो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: सेप्टेम्बर १,, २०१।
कृपया तपाइँको विचार मनपर्दछ, टिप्पणी गर्नुहोस्।x
डिएगो माराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एडिन्ससन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 30
गोंजोलो हिगुइन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: २ 26 अगस्ट, २०१।